Waraysi Cabdulqaadir Cammo: Go’aanka Puntland ee Xiisadda Gacanka iyo Saamayntiisa Xiriirka Puntland iyo DFS (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 17, 2017 3:12 b 0
Aqoonyahan cabbiraya aragtidiisa la xiriirta mowqifka dawladda PL ka qaadatay xiisadda dalalka Khaliijka.
War qoraal ah oo kasoo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in PL ay taageersan tahay mowqifka ay xulufada Sacuudiga iyo Imaaraadku horkacayaan ay ka qaateen dalka Qadar, maadaama dalalkaasi ay xiriir dhow oo dhanka amniga, dhaqaalaha iyo mashaariicda ah la leeyihiin Puntland iyo guud dalka Somaliya-ba.
Iyadoo dhanka kalana ay Puntland ugu baaqday dawladda federalka ee Somaliya inay ka noqoto mowqifkii dhex-dhexaadnimo ee ay horay u qaadatay.
Hadaba muxuu ka dhiganyahay go’aanka ay PL xilligan qaadatay, muxuuse saamayn ah oo ku yeelan karaa xiriirka Puntland iyo dawladda Federalka? Su’aalahaas iyo kuwa kalaba waxaa Radio Daljir uga warramay aqoon yahay Cqaadir Cali Suleymaan oo Cammo lagu naaneyso oo magaalada Bossaso ugu warramay Axmed Sh. Maxamed “Tallman”.